Inthanethi, Izixhumanisi ezaziwa
Ake sixoxe ngendlela ukudala i-akhawunti ku-Google Play Market, ngoba uhlelo lokusebenza Android lithole ukusabalala okungavamile emhlabeni wonke bese kwamanje ujabulela zonke ezihlukahlukene nemisebenzi yesikhulumi ngaphandle "imakethe" cishe kungenakwenzeka.
Kuyini lokhu mkhuba?
Thina siqale incazelo umqondo wathi. Isevisi ye-Google Play Market ibhuku elikhulu ukuthi ine konke kungase kudingeke ukuba abanikazi kumadivayisi eselula okusekelwe uhlelo lokusebenza Android.
izinguqulo Yethula lapha nje ezahlukene uhlelo lokusebenza - Sekuyisikhathi eside uhlelo ajwayelekile "1.5", kanye version "2.3", manje okuyinto efakwe kudivayisi kwesabelomali. Kungatholakala lapha «Ice Cream» (ngamanye amazwi, "4.0"). Qaphela ukuthi lokusebenza le-Play Market inikeza abasebenzisi bayo bangaki izinhlelo kanye nokuqukethwe ezahlukene abezindaba - amabhayisikobho, umculo, e-izincwadi.
Izicelo kwi "Market" ethulwa kanyekanye ezinguqulweni ezahlukene ezahlukene yesistimu yokusebenza izinguqulo. Uma uya ikhathalogi, uhlelo ulandwa ngqo uhlelo lokusebenza Android, okuyinto efakwe emshinini wakho.
Ukuze ufinyelele umthombo esitolo esithile, umsebenzisi kumele wakhe i-akhawunti ye-Google, ngamanye amazwi, ukubhaliswa liyadingeka. Ukuze uthole ukwaziswa sendlela ukubhalisa ku-Google Play Market, sizobe ukukhuluma okwengeziwe. izinsiza Mahhala - kuhle, kodwa esikhathini esithile ofuna ukuyisebenzisa futhi ukhokhe ibhekwa.
Ngakho ungakwazi ungeze isikweletu akho noma yimuphi omunye amakhadi lapho kukhona izindlela, futhi ngemva izinqubo okokufaka ukuqinisekiswa uzokwazi ukuthenga yimiphi imikhiqizo digital.
inqubomgomo ye-Google Inc. sika ukudala i-akhawunti eyodwa, okuyinto eyenziwa yibo bonke ukuphathwa inthanethi nezinsizakalo. Wasebenzise ngokugcwele la "Market" umsebenzisi angakwazi esebenzisa-akhawunti eyodwa kuphela. Bhalisela i-Google Mail, bese ufaka login yakho nephasiwedi kudivayisi ephathekayo.
Uma idivayisi yakho ine edition ekuseni Android, ke kuyodingeka ukubuyekezwa. Kudingeka inguqulo wesithathu kuthebulethi, eyesine smartphone. Uhla oluphelele lolwazi etholakalayo umkhiqizo ikhathalogi, ngeshwa kuphela abakhuluma isiNgisi abahlala.
Uma uhlala e-Russia noma amanye amazwe CIS futhi ufuna ukusizakala zomlando angaphandle, ungazama ukufaka isikhalazo kungenzeka proxy US. Nakuba-ke akudingekile, ngoba kwekhethelo izethameli Russian imikhiqizo makhulu.
Okokuqala, kudingeka ulungiselele inqubo yokubuyekeza isicelo ukuze kwenzeka kuphela uma kwenzeka ukuthi idivayisi yakho iku-Wi-Fi-inethiwekhi. Le isixazululo ngeke wonge imali. Ngoba kungenjalo bayokudla ngaphezu kwalokho sisetshenziselwe mobile inthanethi lokukhokha ngesikhathi kokuthola izibuyekezo.
Sikhuluma inkinga eyinhloko abantu bethenga idivayisi ye-Android, abaqondi ukuthi kwenzekani izimali ezivela akhawunti. Ukuze sigweme isimo esinjalo, iya izilungiselelo "Play Store". Bese ukhetha "Buyekeza ngokuzenzakalela izinhlelo zokusebenza," futhi ucacise ukuthi kungenzeka le nqubo kuphela nge-Wi-Fi.
Ngaphezu kwalokho ukuxoxa navigation. Ikhasi lokuqala yiyona esemqoka. Kukhona "Play Store" izincomo, kodwa kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ziboniswa piecemeal, bese ukhetha into ezithakazelisayo ngokwakho kusuka ikhasi lasekhaya akuyona njalo elula, ngakho kungcono ukuya uhlu lwezigaba, swayipha esikrinini. Lapha uvula kohlelo "Okuba yinjwayelo", "Okuphezulu Okusha", "akhokhelwayo", "Khulula." Lapha sixoxe ngendlela ukudala i-akhawunti e-Google Play Market, futhi ukhulume nge izici isevisi.
Indlela ukusetha "Play Store" kwithebhulethi? Google Market I-Tablet
Izinzuzo imindeni emikhulu. Isixazululo senkinga phakathi kohlaka lomthetho Russian
Le ndlela kancane futhi esingemnandi enkazimulweni! Stouell Ostin: Biography kanye izindima engcono
Cafe "Sandro", Ryazan - zakudala cuisine Georgian: imenyu, ikheli, ukubuyekezwa